China SVC-E Automatic Voltage Stabilizer LED metatra fampisehoana orinasa sy mpamatsy | Tailei
SVC-E fampirantiana fanamafisam-peo mandeha ho azy
malefaka ambany, fanemorana fotoana
Andian-tsarimihetsika SVC-E Sfrvo mibaiko fanaraha-maso AC stabilizer mandeha ho azy. izay fitaovana natao hitehirizana ny herinaratra maharitra ary famatsiana herinaratra fampitaovana herinaratra ao an-tokantrano 220V.50 / 60Hz.
Ny fiovan'ny herinaratra ao amin'ny tamba-jotra ambonin'ny fetra azo avela dia miteraka voka-dratsy amin'ny fitaovan'ny herinaratra .Fampiorenana ny volan'ny AC “TAIELIOK” dia natao hanomezana fiasan'ny ankohonana isan-karazany kalitao ao anatin'ny tarehin-kery tsy mitombina ao anaty tambajotra.
Ity andiana stabilizer voltora ity dia natao mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena ho fiarovana ny fitaovana mifandraika amin'ny fiakaran'ny herinaratra mahery vaika.
25.5 42.5 * * 36
50 * * 27.5 39.5
57 * * 37.5 29.5
Previous: SVC Type Voltage Stabilizer karazana mpanondro
Manaraka: Fisehoana metatra taratra LED voltcage mandeha ho azy SVC-C
TSD Servo Motor Control Wall Napetraka Type Volta ...
SVC-S Super-Thin Type Accuracy avo lenta feno ...
TLCR (A) US socket type stabilizer amin'ny ...
SDVC31-L / XL 4.5A / 6A Fitsipika matetika momba ny ...
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Tips - Vokatra asongadina - Sitemap - Toerana finday 4kva Voltage Stabilizer, 2kva Voltage Stabilizer, Fanamafisam-peo ho an'ny trano rehetra, Voltage Stabilizer ho an'ny amplifier, Fanamafisana ny dizitaly ho an'ny Ac, Voltage Stabilizer 5000va, Vokatra rehetra